Nhau - Kutaurwa kwemudziyo wekuisa bhegi
Mudziyo liner bhegi
Mudziyo lining bhegi, inozivikanwawo semudziyo yakaoma bhegi, mudziyo wakaoma upfu bhegi, mudziyo liner. Inowanzoiswa mune 20 tsoka kana 40 tsoka yemudziyo. Bhegi remukati remudziyo muhombe rinogona kutakura granular uye hupfu zvinhu mune hombe tonnage. Nekuti ndeyekutakurirwa kwekutakura, ine zvakanakira hombe yunifomu yekufambisa vhoriyamu, nyore kurodha uye kudzikisa, kudzikisira vashandi, uye hapana kusvibiswa kwechipiri kwezvinhu, uye zvakare inochengetedza zvakanyanya mutengo uye nguva inoshandiswa mukutakura mota nezvikepe. Maumbirwo egaba liner bag rakagadzirwa zvinoenderana nenhumbi dzakatakurwa nemutengi uye nemidziyo yekubata yakashandiswa. Inogona kukamurwa kuzasi kurodha pasi uye kudzikisa pasi uye pamusoro kurodha uye pasi kudzikisa. Zvinoenderana nekutengesa uye kudzikisa mutengi nzira, inogona kuve yakagadzirirwa kurodha uye kudzikisa chiteshi (ruoko), zipi uye mamwe magadzirirwo. Uye zvakare, maererano nechinodikanwa chechigadzirwa, isu tichagadzirawo bhegi remhepo, mudziyo wekudonha mweya, nezvimwe, izvo zviri nyore kwazvo kuburutsa.
Chinyorwa kuumbwa kwemudziyo wekuisa bhegi:
Main zvinhu Pe / PP rakarukwa jira - 140gsm kana zvinoenderana nevatengi zvinodiwa.
Pe firimu - 0.10-0.15mm, kana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Iyo cylindrical yekudyara chiteshi ine mhepo nzira, yakakodzera kurodha neanofuridza.
Rectangular feed port ine zipi (inogona kuwedzerwa kuvhura), yakakodzera kurodha neanotakura bhandi.
Huwandu hwekuburitsa chiteshi, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Baffle PP / Pe rakarukwa jira kana Pe firimu, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Square simbi 40x40x3x2420mm, 4 zvidimbu / 5 zvidimbu / 6 zvidimbu. Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, izvo hombe zvigadzirwa zvehombodo lining bhegi zvinowanzo kuve Pe rakarukwa jira, Pe firimu uye PP rakarukwa jira.
1. Asina ngozi mahara inoyerera zvigadzirwa.
Soybean, kofi bhinzi, bhari, gorosi, chibage, cocoa poda, hove yekudya, furawa, mukaka hupfu, pizi, nyemba, nzungu, pizi, mupunga, munyu, mbeu, starch, shuga, tii, chikafu chemombe, chakasanganiswa chikafu chezviyo, nezvimwe .
2. Granular kana hupfu hombe nhumbi
PTA, zinc powder, polyethylene particles, polypropylene particles, nylon polymer, ABS resin, polycarbonate particles, aluminium powder, fetiraiza, magirazi mabhesi, polyester particles, PVC zvikamu, soda powder, zinc powder, detergent, porcelain ivhu, titanium dioxide, nezvimwewo.
Iyo nzvimbo yekushandisa mwero wemidziyo mikuru yakakura kwazvo kupfuura yeakajairika bhegi rakarukwa kana bhegi yetoni Inogona kuchengetedza mutengo wekutakura uye kudzikisa mutengo wevashandi.
Iyo inokodzera nzira dzakasiyana siyana dzekutakudza nekuburitsa, uye kurodha nekuburitsa zviri nyore uye zvinokurumidza.Shorten nguva yekuchenesa mudziyo uye chengetedza mutengo wekuchenesa mudziyo.
Mvura isina hunyoro, isina guruva, kudzivirira kusvibiswa kwekunze.
4. Main dhizaina dhizaina remidziyo bhegi
Zipper yakarongedzwa muhomwe. Inokodzera kurodha hove yekudya, pfupa kudya, chimera, kofi bhinzi, cocoa bhinzi uye mhuka yekudya.
Mukati mehombodo yeakachinjika gonhi gonhi kumira. Iyo inokodzera yakakwira diki hombe nhumbi dzakadai seshuga.
Bhegi remukati remberi rebhokisi retsamba rinoburitsa chiteshi. Inokodzera kurodha kabhoni nhema uye zvimwe zvigadzirwa zveupfu.
Yakazara yakavhurika yakarongedzwa bhegi. Inokodzera kurodha mapallet kana mhuka yemakwai.
Pamusoro kurodha mukati bhegi. Inokodzera yakaoma yakaoma nhumbi yakatakurwa negiravhiti.
5. Kuisa matanho
Isa bhegi remukati riner mumudziyo wakachena uye urivhure.
Isa simbi yakakora mune ruoko uye isa pasi.
Sunga mhete yakasununguka uye tambo pane bhegi remukati remukati zvakasimba kune rin'i yedare iri mumudziyo. (kubva kune rimwe divi, kumusoro uye pasi, kubva mukati kuenda kunze)
Iyo yekupedzisira mugumo wehomwe pamusuwo webhokisi yakagadzikwa nerin'i yesimbi pasi netambo yekudhonza kudzivirira bhegi remukati kuti rifambe panguva yekutakura.
Makona mana esimbi simbi akagadzika musuo yakaturikwa nekurembera mhete uye bhanhire rekumisa. Iyo inoshanduka kuturika bhandi inogona kugadziriswa zvinoenderana nekukwirira.
Kiya musuwo wekuruboshwe zvine simba uye wedzera nemhepo compressor kugadzirira kurodha
6. Kuisa uye kudzikisa modhi
Pazasi pebhegi pamusuwo rakagadziriswa nein'i yesimbi pasi netambo yekudhonza kudzivirira bhegi remukati kuti rifambe panguva yekutakura.
Makona mana esimbi simbi akaiswa mubhokisi remukova slot kuburikidza nekurembera mhete uye mabhandi ekumisa. Iyo inoshanduka kuturika bhandi inogona kugadziriswa zvinoenderana nekukwirira.
Kiya musuwo wekuruboshwe zvine simba uye wedzera nemhepo compressor kugadzirira kurodha.